ब्रेकअप भयो ? यी ८ उपाय अपनाउनु भयो भने जीवनमा नयाँ पालुवा पलाउने छ …. – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ब्रेकअप भयो ? यी ८ उपाय अपनाउनु भयो भने जीवनमा नयाँ पालुवा पलाउने छ ….
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि सबैको मन पनि टुट्छ, मन आत्तिन्छ, के गरौं, कसो गरौँ हुन्छ । अनि निन्द्रा, भोक र प्यास नै हराउँछ । मानिस पागलै सहर भईदिन्छ । तर सधैं यसरी जीवन त चल्दैन ।
१. जे भयो सो भयो भनेर ब्रेकअपलाई सहजै लिनुहोस्:
२. ब्रेकअपको चोटबाट कसरी भुल्ने भनेर चिन्तित नहुनुहोस्:
प्राय मानिसहरु टुटिसकेको सम्बन्धमामात्र आफूलाई सिमित राख्ने गर्दछन्, यसभन्दा बाहिर आएर सोच्नै सक्दैनन् । प्राय: मानिसले मेरो प्रेमी यस्तो थियो, मेरो प्रेमिका यस्ती थिइन्, मैले उनलाई यति माया गर्थे र उनले पनि उत्तिकै माया गर्दथिन् र हाम्रो सम्बन्ध उत्कृष्ट थियो तर पनि टुट्यो भनेर मात्रै एकोहोरो सोच्ने गर्दछन् ।
जति भुल्न खोज्यो त्यति नै सम्झना आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले बेवास्ता गर्दछौं । वा उसलाई कसरी बिर्सने होला भनेर जति सोचिन्छ त्यति नै मन दुख्दछ । पीडा कम हुनुको साटो झन बल्झन्छ । त्यसैले हरेक पीडा समयसँगै कम हुदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई बुझेर आनन्दसँग सुत्नुहोस्, आनन्दसँग बस्नुहोस्, खाना समयमा नै खानुहोस् । बस्, यति गरेपछि सयमले सबै घाउ निको पार्दछ ।
३. भूपू प्रेमी प्रेमिकाका बारेमा राम्रो सोच्नुहोस्:
जे जति कारणले सम्बन्ध टुटेको भएता पनि त्यसलाई दिमागमा नराख्दा नै राम्रो हुन्छ । हामी सबैले गल्ती गर्दछौ । त्यस्तै हामी भावुक भएका बेला हाम्रो मन अझबढी दुख्दछ ।
त्यसकारण पनि आफ्नो भूपू मायालुलाई खराव व्यक्ति भनेर घृणा गर्नु हुदैन । यस प्रकारको नराम्रो सोच्नलाई त्यागेर आउने दिनमा पाउन सकिने प्रेम तथा खुशीकाबारेमा सोच्नु भयो भने तपाईको भलो हुन्छ ।
४. तपाईं को हो भनेर पत्ता लगाउनुहोस्:
सामान्यत प्रेमसम्बन्धमा रहेका मानिसहरुले आफूलाई भुलेका हुन्छन् र म भन्दा पनि हामी भन्ने भावना धेरै हुन्छ । तर जव ब्रेकअप हुन्छ, तब मानिसले आफू को हो भनेर पत्ता लगाउने अवसर पाउँदछ ।
त्यसैले आफूलाई मनपर्ने कुरा गर्नुहोस् । आफ्नो भूपूले मन पराउने टिभी कार्यक्रमलाई हेर्नुभन्दा आफैँलाई मन पर्ने कार्यक्रम हेर्नुहोस्, भूपूलाई मन नपर्ने खाना पकाउनुहोस् र आफूलाई मनपर्ने काम मात्रै गर्नुहोस् ।
यसो गर्दा तपाई पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो र अब कस्तो हुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई थाहा पाउन सकिन्छ । तपाई एक्लै हुनुहुन्छ र बिस्तारै ब्रेकअपको पीडाबाट मुक्त हुँदैछु भनेर सोच्नुहोस् । यो तपाईसँग सम्बन्धित विषय हो ।
सम्बन्ध गुमेपछि सबै कुरा गुमेजस्तो लाग्न सक्छ । साथीभाइसँगको सम्बन्धलाई प्रेममा परेको अवस्थामा त्यति ध्यान नदिएका कारण पनि साथीभाइसँग टाढिने सम्भावना हुन्छ ।
आफ्नो पार्टनरलाई समय खर्चिँदा साथीभाइलाई समय नै दिन सकिँदैन । तर जब ब्रेकअप हुन्छ, तब साथीभाइसँग समय बिताउने प्रयाप्त मौका हुन्छ । तर यस्तो अवस्थामा साथीसँग आफ्नो पूरानो सम्बन्धका बारेमा वा ब्रेकअपका बारेमा वा भूपू मायालुका बारेमा नराम्रो कुरा गरेर समय बिताउनु भने हुँदैन । बरु रमाइलो गरेर बिताउनुपर्दछ ।
६. आफ्ना रुचितिर पुन: फर्कनुहोस्:
७. सक्रिय हुनुहोस्:
८. आफ्नो जीवन कति मूल्यवान छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्:
यो उपाय सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय हो, किनभने तपाईको सम्बन्ध असफल भएता पनि तपाईं भने असफल हुनुभएको छैन भन्ने कुरालाई बुझ्न यसले सहयोग गर्दछ । हामी सबैसँग असफल सम्बन्धका आ-आफ्नै कथा हुन्छन् र हामी सबैले यसको पीडा कुनै न कुनै बेला भोगेका हुन्छौँ ।
आफ्नो पनि मूल्य छ, अर्थ छ र म आफैँ एउटा रमाइलो मानिस हुँ भन्ने कुरालाई कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन । एउटा सम्बन्ध सकिएर के भो त ? तपाईका अन्य सम्बन्ध पनि छन् होइन र ? साथै नयाँ सम्बन्धको सम्भाव्यता पनि उत्तिकै छ भन्ने कुराबाट प्रेरित हुनुहोस् ।nepal online patrika
संसद् भवन अगाडि सिलिण्डर बम विष्फोट
कठै !यसरी नेपाली चेलीलाई पुर्याइदैछ यौx न अखडा,दुबईमा १३ जना नेपाली चेली यस्तो अवस्थामा फेxला परे (भिडियो हेर्नुस्) News